Manadio ny volonao maina - Ny tetika sy ny vahaolana tsara indrindra ho azy | Bezzia
Na dia fantatsika aza fa tsy zavatra itodihantsika isan'andro dia tsy ratsy ny mahafantatra fa misy koa ny mety volo fanasana maina. Ny hodi-dohanay dia mamorona sebum na tavy. Ity dia karazana fiarovana ny hodintsika. Mazava ho azy hatrany, ao anatin'ny fetra.
Satria rehefa sebum be dia be no vokarina, dia toa matavy be sy maloto ny volo, amin'ny ankapobeny. Raha tsy mieritreritra, dia tsara kokoa ny manome ny tenantsika fanasana tsara sy veloma ny olana rehetra. Na dia ankehitriny aza dia misy koa ny vaovao teknika fanasana volo maina ary holazainay aminao izany. Andao jerena izay hevitrao!
1 Fomba fanamainana volo madio
1.1 Shampooina maina
1.2 Fetin'ny koba
1.3 Vovoka talcum
Voalohany indrindra, tsy maintsy fantarinao ireo safidy samihafa tokony hosasana ho maina ny volonao. Tsy isalasalana fa mihamaro hatrany ary hamela valiny lehibe ho antsika izy ireo. Ho azon'izy ireo izany esory menaka amin'ny volo ary toa tonga lafatra izy io, nefa tsy mandeha amin'ny rano. Manomboka amin'ny shampoo maina ka hatrany amin'ny fanafody an-trano tsara indrindra, izay foana no afaka manafaka antsika amin'ny olana. Iza amin'izy ireo no hotapahinao?
Tsy misy isalasalana, ny iray amin'ireo mpiara-miasa tsara indrindra ananantsika eny an-tsena dia shampoo maina. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy apetakao ny vokatra famafazana, manasaraka ny volo amin'ny kofehy. Ny zavatra tsara tokony hatao dia ny manao azy manerana ny volonao, fa raha manana ianao fakany tena matavy, avy eo tsy misy toa ny fanoloran-tena kely ho azy ireo. Avelanao hihetsika izany fa mandritra ny 3 minitra fotsiny dia afaka manaingo ny volonao araka ny itiavanao azy ianao. Tsotra toa izany !. Mazava ho azy, tadidio fa tsy maintsy avela hilona ilay vokatra, hanohy hampihatra azy. Raha atao haingana loatra ianao dia mety ho henjana kokoa ny volonao. Afaka mahita shampoo maina ianao ao anatin'ny orinasa lehibe toy ny Schwarzkopf na Fructis ankoatra ny hafa.
Raha tsy manana shampooo maina ianao ary mila fanafody maika, dia mitodika any amin'ny tetika namboarina izahay. Amin'ny lafiny iray dia mila lafarinina ianao na, katsaka fantatra kokoa amin'ny hoe vovoka katsaka. Miaraka amin'ny borosy lehibe iray, ampiharintsika amin'ny faritry ny faka sy ny hodi-doha izany. Mbola hiandry minitra vitsivitsy ihany koa isika vao hiasa kely ny lafarinina ary esorina amin'ny fikorohana tsara ny volo. Mila mijery fotsiny ianao mba tsy hanana faritra fotsy. Ho hitanao ny nanaovan'ny matavy be loatra antsika veloma!
Amin'ny fiainana rehetra, vovoka talcum Namela ny hoditsika ho marefo kokoa izy ireo ary mazava ho azy, miaraka amin'ny menaka manitra matsiro. Raha mbola ao an-trano ianao nefa zara raha mampiasa azy ireo dia raiso ity torohevitra ity. Afaka mahazo fampiasana vaovao ianao izao ary ho an'ny volonay izany. Amin'ity tranga ity dia hofafazanay manerana ny faka sy volo amin'ny ankapobeny. Tsy maninona na malahelo bebe kokoa aza isika. Avy eo atsofoka avy eo an-tampon'ny volo ka hatrany amin'ny faran'ny. Ka nesorinay avokoa ny dian-tongotra rehetra. Ho hitanao ny fomba avelao ho malefaka kokoa, madio kokoa ary misy fofona mahafinaritra ny volonao.
Tsy misy isalasalana fa tsy maintsy lazaina fa ireo fanafody ireo dia tonga lafatra amin'ity andro mihazakazaka ity. Rehefa mifoha hariva isika na miala fivoriana ary manana daty hafa. Saingy tsy tokony hatao ny fanararaotana azy ireo, satria ilain'ny volo koa ny rano sy ny shampooing azy ary koa ny fanaony mahazatra. Izany no antony hiresahantsika vahaolana somary mandehandeha izay miasa tanteraka, saingy mijanona mandritra ireo fotoana tsy misy safidy hafa fotsiny izy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fandram-bolo » Fomba fanamainana volo madio
Maninona no maharary ny firaisana aorian'ny fiterahana